ဘ၀ဆိုတာ...ပဲတင်သံလိုပဲ - deounews(ဒယ်အိုးသတင်း)
မူလစာမျက်နှာသင့်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအဖွဲ့ ဝင်များဓါတ်ပုံများဗီဒီယိုများအဖွဲ့ များဘလော့ များLeaderboardsတရားတော်များဒေါင်းရန်
Posted by wai lin naing on October 5, 2011 at 10:26pm
ဒါဆိုရင်...အဲ့ဒီ့အကောင်းဆုံးတွေ မင်းဆီ ပြန်လာလိမ့်မယ်..
မာန်မာနကိုချိုးနိုမ့်ပါ။အားလုံး ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ကြင်နာပါ။စာနာပါ။ဒါဆိုရင် ဒီကမ္ဘာလောကကြီး သာယာလှပနေမှာပါ။
ဂုဏ်သတင်းဆိုတာ ရေခိုးရေငွေ့ ပါ။
ဒီနေ့ ကောင်းချီးပေးမှူတွေဟာလဲ မနတ်ဖြန်လှောင်ပြောင်မှူတွေပါ။
တည်တည်ခန့် ခန့် နဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်တာကတစ်ခုထဲပါ
မင်းတို့ ကိုယ်မင်းတို့ ကော တခြားလူတွေကိုပါ
ခွှင့်လွှတ်စိတ်မွှေးပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ပါလျတ်နဲ့ 
ဘာဖြစ်လို့ သတ်ပြင်းချပြီး နာကြည်းနေမှာလဲ။
You need to beamember of deounews(ဒယ်အိုးသတင်း) to add comments!
ကျေးဇူးတော်အရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး
၁။ သင် အသက်တွေကြီးနေပြီလောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ကြီးနေတုန်းပဲလား…၂။ သင် သွားတွေကျိုးနေပြီမာန် မာနတွေ ကျိုးပြီလား…၃။ သင်ပါးရေတွေတွန့်နေပြီမကောင်းမှုမှာ တွန့်ဆုတ်ပြီလား…၄။ သင် အားအင်တွေ လျော့ပါးနေပြီတဏှာ ဆန္ဒတွေ မလျော့ပါးသေး ဘူးလား…၅။ သင် ဆံပင်တွေဖြူနေပြီသင့်စိတ်ထားတွေ ဖြူပြီလား…၆။ သင် မျက်စိတွေ မှုန်ဝါးနေပြီသင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းရော မှုန်ဝါးနေတုန်းပဲလား …
(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး) (မိုးကုတ်ဝိပဿနာပြန့်ပွားရေး) (၂၂ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများထံမှ သြ၀ါဒခံယူခြင်း၊ လှူဒါန်းပူဇ်ာခြင်းအခမ်းအနားမှတ်တမ်း) (အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အနာဂတ်ရေးဆိုင်ရာလျှောက်ထားလွာ) (သံဃာသြ၀ါဒခံယူပွဲနှင့် သံဃာပူဇော်ပ) (မြန်မာ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖွဲ့) (အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်) (ဖားအောက်တောရဆရာတော်) (ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား) (အရှင်ဥတ္တမသာရ) (အရှင်လောကနာထ) (အရှင်လောကနာထ) (ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ) (သီတဂူဆရာတော်) အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ-၁) အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ-၂) (သဲအင်းဂူဆရာတော်) (မဟာစည်-၁) (မဟာစည်-၂) (အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ) (အရှင်ဆန္ဒာဓိက)
ဤဆိုဒ်သို့ ရောက်ရှိလာသူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နုလုံး အေးမြချမ်းသာကြပါစေ။
Dhamma Duta Bago
ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ...
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု ...
ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ (စစ်ကိုင်း)
ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ (မြိတ်)
531 ကိုသူ ၏ တရားဌာန...
Megumi 211- ဓမ္မဒါနသို့....
မင်းဝေ ၈၅-၏ ရုပ်သံ ဓမ္မသို့
Dhamma ဓမ္မ Myanmar Wikipedia
Pali English Dictionarie
မြန်မာ အင်တာနက် စာအုပ်များ
Flash Player for .swf
Nero Ultra Edation 9.09 Full
Zaw Gyi installer packge
GiveaGift © 2014 Created by ဒယ်အိုး. Powered by